Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray an'i Ida Noddack | Jacob Barnett: Ny fiainana taloha Talenta sy famokarana ankizy - Fikarohana Reincarnation
After seeing Jacob (Jake) Barnett, izay prodigy matematika sy fizika, ao amin'ny seho amin'ny fahitalavitra 60 Minutes tamin'ny Janoary 2012, nanontany tena aho hoe avy aiza ny fahaizany. Tamin'ny resaka iray nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson, nanontaniako hoe iza i Jacob no mety ho tonga nofo tonga taloha. Aza adino fa rehefa manana fivoriana miaraka amin'i Kevin aho dia tsy teniko aminy izay fanontaniako mialoha ny fotoam-pivoriana.
Ahtun Re, niresaka tamin'ny alalàn'i Kevin, dia nilaza tamiko fa vehivavy i Jakôba nandritra ny fotoana niainany izay voalohany nanao hypothesize ny fiozolota, izay antsoina koa hoe famoronana atoma. Ity trangan-javatra ity no fototry ny angovo nokleary, ary koa ny fitaovam-piadiana niokleary.
Ankoatr'izay, Ahtun Re dia nilaza tamiko ny anaran'i Jakôba tamin'ity lasa nofo ity ary nanoratra azy ho ahy mihitsy aza. Ahtun Re nilaza tamiko fa i Jakôba dia Ida Noddack, fizika ara-batana simia sady simia izay tokoa no voalohany nilaza fa mety hitranga ny famokarana niokleary. Ankoatr'izay, dia nirotsaka ho loka Nobel telo izy. Hitako taty aoriana fa misy fitoviana lehibe eo amin'i Ida sy Jacob.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Mitovitovy endrika mitovy amin'i Ida Noddack sy Jacob Barnett.
Talenta fiainana talohat: Misongadina ao amin'i Jakôba ny talenta fizika nataon'i Ida.
Fanovana ny fiarahamonina Nasionaly sy ny fiarahamonina Ethique hatramin'ny Fahaiza-miaina Fahatongavana ho an'ny hafa: Alemanina i Ida, raha i James dia teraka tany Etazonia.